GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Haitian Creole Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Italian Japanese Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Portuguese (European) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Turkish Ukrainian Vietnamese Zulu
“Ọtụtụ ụmụ nwoke na-agwa m ka mụ na ha kpawa. E nwekwara ọtụtụ ụmụ nwoke mara mma mụ na ha nwere ike ịkpa.”—Whitney.
“Ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-arịọsi ụmụ okoro ike ka ha na ha kpawa. Ọ na-adị m ka m kweta. Ma, ọ bụrụ na mụ ajụọ ndị mụrụ m, ama m na ha agaghị ekwe.”—Phillip.
O NWERE ike na-agụsi gị agụụ ike ka gị na onye ị hụrụ n’anya—na onye hụrụ gị n’anya—na-akpa, ọbụna mgbe ị ka bụ nwata. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Jenifer kwuru, sị: “Mgbe m dị afọ iri na otu, ọ malitere ịgụ m agụụ ka mụ na nwoke kpawa.” Nwa agbọghọ ọzọ aha ya bụ Brittany kwukwara, sị: “N’ụlọ akwụkwọ, ọ bụrụ na i nweghị nwoke gị na ya na-akpa, ọ ga-adị gị ka ị bụghị nwaanyị!”
Gịnwa kwanụ? Ị̀ chọwala ịlụ di ma ọ bụ nwunye? Iji zaa ajụjụ ahụ, anyị kwesịrị ibu ụzọ tụlee otu ajụjụ ka mkpa:
Gịnị Ka “Nwoke na Nwaanyị Ịkpa” Pụtara?
Kanye akara n’ihe ị chọrọ ịza n’ajụjụ ndị a:
Gị na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe gị hụrụ ibe unu n’anya. Ọtụtụ ugboro n’ụbọchị, ị na-eji ekwe ntị gị ezigara ya ozi ma ọ bụ na-akpọ ya. Gị na ya ùnu na-akpa?
Mgbe ọ bụla gị na ndị enyi gị zukọtara, gị na otu onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe gị na-anọkarị. Gị na ya ùnu na-akpa?
Ikekwe, ịza ajụjụ nke mbụ ahụ esighịrị gị ike. Ma o nwere ike ịbụ na i bu ụzọ chee echiche tupu gị azaa ajụjụ nke abụọ na nke atọ. Gịnị kpọmkwem ka nwoke na nwaanyị ịkpa pụtara? N’ezie, nwoke na nwaanyị ịkpa pụtara na ha abụọ na-emekọ ihe ma nwee mmasị n’ebe ibe ha nọ. Ya mere, azịza nke ajụjụ atọ ahụ a jụrụ na mbụ bụ ee. Ma ọ̀ bụ n’ekwe ntị, ma ọ bụ n’ihu n’ihu, n’ebe ndị mmadụ nọ ma ọ bụ n’ebe ndị mmadụ na-anọghị, ọ bụrụ na gị na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe gị nwere mmasị n’ebe ibe unu nọ, na-eziritakwa ozi mgbe niile, unu na-akpa. Ị̀ dịla njikere ịlụ di ma ọ bụ nwunye? E nwere ajụjụ atọ ị ga-atụle ga-enyere gị aka ịchọpụta.
Gịnị Mere I Ji Chọọ Ka Unu Na-akpa?
N’ọtụtụ ebe, a na-ewere na nwoke na nwaanyị ịkpa bụ ụzọ kwesịrị ekwesị ha ga-esi amata ibe ha nke ọma. Ma e kwesịrị inwe ezigbo ihe mere nwoke na nwaanyị ga-eji na-akpa. Ọ bụ iji nyere nwa okorobịa na nwa agbọghọbịa aka ịmata ma hà ga-alụ.
N’eziokwu, o nwere ike ịbụ na ndị ọgbọ gị na-ewere nwoke na nwaanyị ịkpa dị ka ihe egwuregwu. Ma eleghị anya, ọ na-atọ ha ụtọ ka ha na enyi ha nwoke ma ọ bụ enyi ha nwaanyị ihe ya kasị amasị ha na-anọ, n’agbanyeghị na ha achọghị ịlụ onye ahụ. Ụfọdụ nwere ike iwere enyi ha nwoke ma ọ bụ enyi ha nwaanyị dị ka onye ha ga-eji na-akpa nganga n’ihu ọha. Ọ bụghị ihe ijuanya na mmekọrịta dị otú ahụ anaghị adịtekarị aka. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Heather kwuru, sị: “Ọtụtụ n’ime ndị ntorobịa ndị nwere enyi nwoke ma ọ bụ enyi nwaanyị na-etisa n’ime otu izu ma ọ bụ abụọ. Ha na-ele mmekọrịta ha na mmadụ ibe ha anya dị ka ihe na-ekwesịghị ịdịte aka. E nwekwara ike ikwu na ọ na-eme ka ha mụta ịgba alụkwaghịm kama ịmụta ịnọgide n’alụmdi na nwunye.”
O doro anya na mgbe gị na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe gị na-akpa, ị na-eri onye ahụ obi. Ya mere, jide n’aka na i bu ezi ihe n’obi. Chegodị echiche: Ị̀ chọrọ ka onye ọzọ were obi gị na-egwuri egwu dị ka à ga-asị na ọ bụ ihe ụmụaka ji egwuri egwu, nke a ga-atụtụrụ, tụfuokwa n’egbughị oge? Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Chelsea sịrị: “Mgbe ụfọdụ, m na-eche na nwoke na nwaanyị ịkpa kwesịrị ịbụ ihe egwuregwu, ma ọ bụghị ihe egwuregwu ma otu onye buru n’obi na ha ga-alụ, ma onye nke ọzọ ebughị ya n’obi otú ahụ.”
Ị̀ Dị Afọ Ole?
Afọ ole ka i chere onye na-eto eto kwesịrị ịdị tupu ya na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe ya akpawa? ․․․․․
Ugbu a, jụọ papa gị ma ọ bụ mama gị ajụjụ ahụ, ma ọ bụkwanụ jụọ ha abụọ, ma dee ihe ha zara. ․․․․․
Afọ ole papa gị na mama gị gwara gị i dere nwere ike ịkarị afọ ole i chere onye na-eto eto kwesịrị ịdị. O nwere ike ọ gaghị akarị ya! I nwere ike ịbụ otu n’ime ndị ntorobịa maara ihe, ndị kpebiri na ha na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe ha agaghị akpa ruo mgbe ha toruru ịmata onwe ha nke ọma. Otu nwa agbọghọ dị afọ iri na asaa aha ya bụ Danielle kpebiri ime otú ahụ. Ọ sịrị: “Ụdị onye m gaara achọ ịlụ n’afọ abụọ gara aga dị nnọọ iche n’ụdị onye m ga-achọ ịlụ ugbu a. Ọbụna ugbu a, echeghị m na m ga-ekpebili ụdị onye m ga-alụ. Mgbe m chere na amatala m ihe m chọrọ, afọ ole na ole agafeekwa, mgbe ahụ ka m ga-echewe echiche ka mụ na nwoke kpawa.”
E nwere ihe ọzọ mere o ji dị mma ka mmadụ cheretụ. Baịbụl ji okwu bụ́ “ntoju ntorobịa” kọwaa oge agụụ mmekọahụ na-esi ike ná ndụ. (1 Ndị Kọrịnt 7:36) Ọ bụrụ na gị na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe gị na-akpa mgbe ị ka nọ n’oge ntoju ntorobịa, o nwere ike ime ka agụụ mmekọahụ gụsiwe gị ike, meekwa ka i mee omume ọjọọ. N’eziokwu, o nwere ike ịbụ na ọ bụghị ihe ọjọọ n’anya ndị ọgbọ gị. Ọ na-anụ ọtụtụ n’ime ha ọkụ n’obi inwe mmekọahụ. Ma i nwere ike izere ụdị echiche ahụ! (Ndị Rom 12:2) A sị ka e kwuwe, Baịbụl dụrụ gị ọdụ ka ‘ị gbaara ịkwa iko ọsọ.’ (1 Ndị Kọrịnt 6:18) Ọ bụrụ na i chere ruo mgbe ị gafere oge ntoju ntorobịa, ‘ị gaghị ekwe ka ọdachi dakwasị gị.’—Ekliziastis 11:10.
Ị̀ Chọwala Ịlụ Di Ma Ọ Bụ Nwunye?
Iji nyere gị aka ịza ajụjụ a, leruo onwe gị anya. Chee echiche banyere ihe ndị a:
Mmekọrịta gị na ndị mmadụ. Olee otú i si akpaso ndị mụrụ gị na ụmụnne gị àgwà? Ọ̀ na-esiri gị ike mgbe niile ijide onwe gị mgbe gị na ha na-emekọ ihe, ikekwe, gị ejiri olu ike ma ọ bụ njakịrị na-agwa ha okwu? Ọ bụrụ na a jụọ ha, gịnị ka ha ga-ekwu banyere gị? Otú i si akpaso ndị ezinụlọ gị àgwà na-egosi otú ị ga-esi na-akpaso di gị ma ọ bụ nwunye gị àgwà.—Gụọ Ndị Efesọs 4:31.
Otú i si ele ihe anya. Ì nwere olileanya na ihe ga-aka mma, ka ị̀ na-eche na ọ ga-aka njọ? Ì nwere ezi uche, ka ị̀ na-esi ọnwụ mgbe niile ka e mee ihe otú ị chọrọ? Ì nwere ike ijide onwe gị mgbe ihe siri ike? Ị̀ na-enwe ndidi? Ịmụta àgwà ndị so ná mkpụrụ nke mmụọ nsọ ugbu a ga-enyere gị aka ịbụ di ma ọ bụ nwunye n’ọdịnihu.—Gụọ Ndị Galeshia 5:22, 23.
Otú gị na ego si aga. Olee otú gị na ego si aga? Ị̀ na-ejikarị ụgwọ? Ị̀ na-anọgideli n’ọrụ i nwetara? Ọ bụrụ na ị naghị anọgideli na ya, gịnị mere? Ọ̀ bụ n’ihi otú ọrụ ahụ dị, ka ọ̀ bụ n’ihi onye ị na-arụrụ ọrụ, ka ọ̀ bụkwanụ n’ihi àgwà na-adịghị mma ị na-akpa? Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike iji ego gị eme ihe bara uru, olee otú ị ga-esi elekọta ezinụlọ gị?—Gụọ 1 Timoti 5:8.
Mmekọrịta gị na Chineke. Ọ bụrụ na ị bụ Onyeàmà Jehova, gịnị ka ị na-eme ka ị ghara imebi mmekọrịta gị na Chineke? Ị̀ na-ewepụta oge iji gụọ Baịbụl, iji gaa ozi ọma, na iji gaa ọmụmụ ihe? Onye ị ga-alụ kwesịrị ịlụ onye okwukwe ya siri ike.—Gụọ Ekliziastis 4:9, 10.
Ọ bụrụ na mmadụ enyewe gị nsogbu ka gị na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe gị na-akpa mgbe ị na-achọbeghị ịlụ di ma ọ bụ nwunye, o yiri mmadụ ịmanye gị ile ule ikpeazụ n’ihe ị ka malitere ịmụ amụ. O doro anya na ọ gaghị adị mma otú ahụ! I kwesịrị ịmụ ihe ahụ ruo ogologo oge ka i nwee ike ịmata ụdị ajụjụ a ga-ajụ gị n’ule ahụ.
O yiri nwoke na nwaanyị ịkpa. Dị ka anyị hụrụ, nwoke na nwaanyị ịkpa abụghị ntakịrị ihe. Ya mere, tupu gị enwee mmasị n’otu onye, i kwesịrị iwepụta oge mụọ “ihe” dị oké mkpa, ya bụ, otú ị ga-esi bụrụ ezigbo enyi ndị mmadụ. Mgbe ị ga-emecha hụ onye ị ga-alụ, ọ ga-adịrị gị mfe ime ka mmekọrịta gị na ya sie ike. A sị ka e kwuwe, ezigbo alụmdi na nwunye bụ mmekọrịta nke ezigbo enyi abụọ.
Icheretụ tupu gị na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe gị amalite ịkpa agaghị eme ka ị ghara inwere onwe gị. Kama nke ahụ, ọ ga-eme ka i nwekwuo ike ‘ịṅụrị ọṅụ mgbe ị bụ onye ntorobịa.’ (Ekliziastis 11:9) Ọ ga-eme ka i nwee oge ị ga-eji kwadebe onwe gị, ya bụ, imezikwu àgwà gị, nke ka nke, imezikwu mmekọrịta gị na Chineke.—Abụ Ákwá 3:27.
GỤKWUO BANYERE ISIOKWU A NA NWANNE AKWỤKWỌ A E BU ỤZỌ BIPỤTA, ISI NKE 29 NA NKE 30
Ọ̀ na-adị gị ka gị na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe gị kpawa n’emeghị ka ndị mụrụ gị mara? E nwere ọtụtụ nsogbu dị n’ime otú ahụ karịa otú i chere.
“Onye maara ihe na-echebara nzọụkwụ ya echiche.”—Ilu 14:15.
Gụọ 2 Pita 1:5-7 ma họrọ otu àgwà i kwesịrị ịmụtakwu nke ga-enyere gị aka mgbe gị na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe gị ga-akpawa maka ọlụlụ. Mgbe otu ọnwa gachara, chọpụta otú ị mụtaruru àgwà ahụ—na otú i si na-akpa ya ugbu a n’ụzọ ka mma.
Ọtụtụ nchọpụta e mere gosiri na ndị lụrụ di na nwunye mgbe ha na-erubeghị iri afọ abụọ na-agbakarị alụkwaghịm n’ime afọ ise ha lụchara.
Iji kwadebe maka alụmdi na nwunye, m kwesịrị ịmụtakwu àgwà ndị a: ․․․․․
Otú m ga-esi amụtakwu àgwà ndị a bụ ․․․․․
● Olee ebe ụfọdụ gị na ndị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe gị kwesịrị ịna-akpakọrịta?
● Gịnị ka ị ga-agwa nwanne gị nke chọrọ ka ya na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe ya na-akpa mgbe ọ na-etorubeghị ịlụ di ma ọ bụ nwunye?
● Ọ bụrụ na gị na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe gị na-akpa, ma i bughị n’obi ịlụ ya, olee otú obi nwere ike ịdị onye ahụ?
[Ihe odide gbatụrụ okpotokpo nke dị na peeji nke 18]
“Echere m na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe gị gị na ya kwesịrị ịna-akpa bụ onye ị hụrụ n’anya n’ezie, onye gị na ya nwere ike ibi. Ihe i kwo na-abịa onye ahụ nso bụ na ị hụrụ ya n’anya, ọ bụghị naanị ka gị na ya na-akpa.”—Amber
[Foto dị na peeji nke 16 na 17]
Ọ bụrụ na gị na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe gị na-akpa, ma i bughị n’obi ịlụ ya, ị na-eme ka nwatakịrị nke ji ihe o ji egwuri egwu a zụtaara ya ọhụrụ gwutụ egwu ma tụfuo ya
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Àchọwala M Ịlụ Di Ma Ọ Bụ Nwunye?
yp2 isi 1 p. 14-20